समाचार – Page 310 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
पोखरा लेखनाथमा २०० मत गन्दा एमालेकै अग्रता (मतपरिणाम सहित)
पोखरा, १ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । २ सय मत गन्दा एमालेले नै अग्रता कायम गरेको छ । एमाले मेयरः ९२ उपमेयरः ८५ वडा अध्यक्षः ९१ काँग्रेस मेयरः ६२ उपमेयरः ६६ वडा अध्यक्षः..
पोखरा लेखनाथमा १५० मत गन्दा एमालेकै अग्रता (मतपरिणाम सहित)
पोखरा, १ जेठ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । १ सय ५० मत गन्दा एमालेले नै अग्रता कायम गरेको छ । एमाले मेयरः ७१ उपमेयरः ६६ वडा अध्यक्षः ७० काँग्रेस मेयरः ४६ उपमेयरः ४६ वडा अध्यक्षः..
पोखरामा एमाले अगाडी
पोखरा, १ जेठ । देशकै सवैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरा लेखनाथमा मत गणना जारी छ । वडा नं. १ को मत गणना गरिदा एमालेले अग्रता लिएको छ । २ हजार ४ सय ५९ मत खसेको वडामा सय मत गनिएको छ । वडा नं. १ मा मेयरमा एमाका मानबहादुर जिसीले ५१, उपप्रमुख मञ्जु गुङले ४७, एमालेका वडा..
मादी २ मा एमालेका एक्काजंग विजयी
पोखरा, १ जेठ । जारी मतगणनामा कास्कीको मादी गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर २ मा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । काँग्रेस उम्मेदवार भोज बहादुर गुरुङलाई एमालेका उम्मेदवार एक्काजंग गुरुङले पराजीत गरेका हुन् । एक्काजंगले ४ सय ३८ मत प्राप्त गर्दा भोजले २ सय ४१ मत..
कास्कीमा एमालेको बिजयी सुरुवात
पोखरा, १ जेठ । स्थानीय तहको चुनावमा एमालेको कास्कीमा बिजयी सुरुवात भएके छ । आईतबार सम्पन्न चुनावबाट मादी गाउँपालिकाको १ नम्बर वडामा एमाले बिजयी भएको हो । कास्कीको पाँच स्थानीय तह मध्ये एउटा गाउँपालिमाका मतगणना जारी छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका र अन्य तीन..
कास्कीको मतगणना सोमबार
पोखरा, ३१ बैशाख । आईतबार सम्पन्न कास्कीका स्थानीय चुनावको मतगणना सोमबार मात्रै हुने भएको छ । मतगणनाका लागि मतपेटिकाहरु संकल भएपछि दल विच मुचुल्का गरेर मतपेटिका स्थानीय तहको केन्द्रमा लगिने र लगत्तै मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन..
मतदान गरेर घुम्न निस्किएका एक युवकको हत्या
तनहुँ, ३१ बैशाख । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा आइतबार एकजनाको हत्या भएको छ । व्यास नगरपालिका वडा नम्बर १ का विक्रम परियारको अज्ञात समूहले आक्रमण गरी हत्या गरेको हो । तनहुँको ब्यास घर भएका परियार कलाकारिता क्षेत्रमा संलग्न छन् । काठमाडौं बस्दै आएका उनी..
गोरखाको मतदान शान्तिपूर्ण
गोरखा, ३१ बैशाख । स्थानीय तहको चुनाव गोरखामा शान्तिपूर्ण भएको छ । केही छिटपुट बाहेकका मतदान केन्द्रहरुमा शान्तिपूर्ण मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । केही केन्द्रमा भने सामान्य विवाद देखिएको छ । विवादका कारण केही समय मतदान..
कास्कीमा ७५ प्रतिशत मतदान
पोखरा, ३१ बैशाख । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान सकिएको छ । आइतवार विहान ७ देखि साझ ५ बजेसम्म तोकिएको समयमा कास्कीमा झण्डै ७५ प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, रुपा र मादी..